I-Amazon ifuna ukuthi uthenge imithi yakho | Izindaba zamagajethi
I-Amazon ifuna ukuthi uthenge imithi yakho
UJoseph Alfocea | | Amazon, Izaziso
I-United States yizwe, ngokuhle noma ngokubi, elinemikhakha ehluke kakhulu kithina. Enye yazo, futhi ebilokhu inginakile njalo lapho ngiyibona kumabhayisikobho nakuchungechunge lwethelevishini (angikaze ngibe nenjabulo yokuyivakashela okwamanje) kungenzeka thenga imithi ethile ezitolo ezinkulu, njengalowo ohamba ayothenga ikani le-tuna. Kodwa-ke, manje i-Amazon ifuna ukuya kwelinye igxathu futhi ibe uhlobo lwekhemisi eliku-inthanethi.
Ngempela, njengoba nje inkampani enkulu yokuthengisa yaqala ukuthengisa izincwadi online futhi manje ikuvumela ukuthi ugcwalise inqola yakho yokuthenga ngemikhiqizo yokuhlanza kanye nokudla, izinhlelo zeAmazon ziyaqhubeka nokwandisa ibhizinisi ukuze ukukunikeza ngemithi oyinikezwe ngudokotela.
I-Amazon, ikhemisi elilandelayo eliku-inthanethi?
Ngakho-ke, isikhathi singafika lapho, esikhundleni sokuya ekhemisi, singakwazi oda imishanguzo yethu kadokotela e-Amazon kanye nokudla, imikhiqizo yezobuchwepheshe neminye imikhiqizo evela ezigabeni ezahlukahlukene kakhulu. Ngokusho qinisekisa I-CNBC, i-e-commerce giant icabanga ukungena ebhizinisini lekhemisi. U-Eric French, imenenja yokudla e-Amazon, kubikwa ukuthi wenyuse ukuqashwa kwabasebenzi bephrojekthi ebizwa ngokuthi "ukunakekelwa kwezempilo" ngonyaka odlule, ngenkathi ebonisana "nabantu abaningi."
Ezinyangeni ezithile ezedlule, i-CNBC ibike ukuthi i-Amazon iqashe uMark Lyons wenkampani yomshuwalense wezempilo ongenzi nzuzo I-Premera Blue Cross, ukwakha umphathi wangaphakathi wekhemisi. Futhi kungenzeka ukuthi impumelelo yale phrojekthi inquma ukuthi i-Amazon iyaqhubeka nezinhlelo zayo noma cha.
Futhi yize isinqumo singafika ngokushesha kunokulindelekile, ukulethwa kwemithi ekhaya kungenzeka kungasondele kangako ngoba kudinga ukuba nochwepheshe ekuhlinzekweni kwemithi. Ngakho-ke, abanye abahlaziyi bakhuluma ngonyaka owodwa noma emibili ngaphambi kokuba inkampani imemezele umsebenzi wayo omusha, ongaze wenziwe ngokubambisana nomthengisi wezidakamizwa. Futhi lokho e-United States ngoba kuwo wonke umhlaba onjengeSpain, abanumzane osokhemisi, ungazola futhi thina, linda sihlezi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » I-Amazon ifuna ukuthi uthenge imithi yakho
I-Amazon = iSkynet
Phinda uthole iphasiwedi ye-Gmail
Imfihlo egcinwe kahle kakhulu ngaphakathi kweXbox One X iveziwe